အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲလည်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို ပြည်သူတိုက်ထုတ်လို — မြန်မာဌာန
အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲလည်း စစ်အာဏာရှင်တွေကို ပြည်သူတိုက်ထုတ်လို
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ မနေ့က အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲက ကျည်ဆန်အစစ်တွေအပါအဝင် ရာဘာကျည်တွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအပါအဝင် မြို့အတော်များများမှာ သေဆုံးသူ ၁၈ ဦး ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူ၊ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြိုခွဲမှုတွေရှိနေပေမယ့် ပြည်သူတွေကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို အပြီးတိုင် တိုက်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြတာတွေလဲ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လုံခြုရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မနေ့ကသေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၁၈ ဦးရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းပွဲအပြီး ပြည်သူအများဆုံး အသက်ဆုံးပါးရတဲ့နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲအများအပြားမှာ စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူတွေကို တစုံတရာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ စစ်မြေပြင်သုံး ကျည်ဆံအစစ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေက အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ရှုတ်ချပြီး အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လူထုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထဲ အာဏာပြန်လွှဲဖို့ ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုနေချိန်မှာ အခုလို ဖြိုခွဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေတာပါ။
ဆန္ဒပြသူတွေကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ရကြောင်းနဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကူရာကယ်ရာမဲ့သလို ခံစားရကြောင်း မြောက်ဥက္ကလာက ဦးမင်းသော်က က ပြောပါတယ်။
မနေ့က စစ်တပ်နဲ့ရဲက ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေကို အပြီးးတိုင်တိုက်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကိုစည်သူမောင်က ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးလေ့လာသူဦးသန်းစိုးနိုင်က ပြည်သူလူထုက စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကို မြင်နေရကြောင်း၊ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေ အထိအခိုက်မများလာခင် နိုင်ငံတကာကအမြန်ဝင်ရောက်ကူညီဖို့ ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြကြောင်း အခုလိုပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကို စစ်တပ်နဲ့ရဲက အရှိန်မြှင့်အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတာကို အမေရိကန် နဲ့ ဗြိတိန်တို့က ချက်ချင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးရောက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံမှာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးချယ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရအာဏာပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ရဲရင့်ပြတ်သားစွာပြောဆိုခဲ့ပုံနဲ့ မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေပုံတွေကို နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေကလည်း အစဉ်တစိုက် ဖော်ပြနေတာမြင်ရပါတယ်။
How many people are required to die for democracy and freedom in Myanmar ???
Kindly advise the UN, US, UK, EU and others world communities.
"SAVE DEMOCRACY AND HUMAN-RIGHT IMMEDIATELY"